ဒူဒူကြီး: Crankcase Explosion & Oil Mist Detector - (၂)
blow pass နဲ့ atomized spray ကဲ့သို့ high pressure leak ကြောင့်ပါါပေါက်လာတဲ့ oil mist particles တွေနဲ့ hot spot ကြောင့်ပါါပေါက်လာတဲ့ oil mist particles တွေဟာ (3 ~ 10) microns အရွယ်အစားခန့်ရှိပါတယ်။ hot spot ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ oil mist ကိုမြင်ရတာမို့ blue smoke လို့လဲခေါါကြပါတယ်။ မူလက flash point (200°C) ခန့်ရှိတဲ့ lubricating oil ဟာ၊ blue smoke အဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါ flash point ဟာလည်း၊ (150°C) အောက်သို့ကျဆင်းသွားပါတော့တယ်။ engine ရဲ့ out put power (2, 250) Kw နဲ့အထက် သို့မဟုတ် cylinder ရဲ့ diameter (300) mm နဲ့အထက် engine တိုင်းမှာ၊ oil mist ဖြစ်ပေါါမှု level ပမာဏကိုကြိုတင်သိနိုင်ဖို့ OMD ဆိုတဲ့ oil mist detector တတ်ဆင်အသုံးပြုရန် SOLAS regulation မှာ mandatory အဖြစ်၊ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
2 stroke engine တွေမှာ၊ oil mist detector ကို crankcase explosion မဖြစ်ပေါါခင်ကြိုတင်သိနိုင်ဖို့၊ တတ်ဆင်ကြသလို timing gear case explosion မဖြစ်ပေါါခင်ကြိုတင်သိနိုင်ဖို့၊ timing case oil mist detector ကိုလည်း တတ်ဆင်ကြတာတွေ့ဖူးပါတယ်။ oil mist detector တွေဟာထုတ်လုပ်သူပေါါ မူတည်ပြီး ပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ ကွာခြားကြပေမယ့်၊ photo electric cell အသုံးပြုထားတဲ့ အခြေခံ အလုပ်လုပ်ပုံမှာတော့ အားလုံးတူညီကြပါတယ်။ OMD လို့ခေါါတဲ့ oil mist detectors တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် light obscuration type OMD နဲ့ light scatter type OMD ဆိုပြီး (၂) မျိုးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
measuring cell unit နဲ့ reference cell unit တွေ parallel တတ်ဆင်ထားတဲ့ detector ကို obscuration type OMD အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ obscuration type ODM မှာ၊ crankcase ထဲမှ oil mist တွေကို OMD ဟာ၊ အဆက်မပြတ် စုတ်ယူနေပြီး oil mist ရဲ့ density မြင့်တက်လာတဲ့အခါ alarm အဖြစ်အချက်ပေးသလို၊ engine ကိုပါ slow down ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ crankcase တိုင်းမှာ sampling tubes တွေကို တတ်ဆင်ထားပြီး fan အသေးလေးတလုံးမှ စုတ်ယူပါတယ်။ sampling tubes တွေဟာ တခုနဲ့တခု loop အနေနဲ့ယူထားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ၊ crankcase တိုင်းမှာ တခုစီ သီးခြားတတ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီး၊ tube တခုစီဟာ (12.5) meter အလျှားထက်မပိုသင့်ပါဘူး။
Fig. Reflector - light obscuration type oil mist detector
rotator unit ဟာ sampling tube မှတဆင့် crank case တခုစီမှ oil mist ကို (၄) စက္ကန့်ခြား တခါပြောင်းလဲစုတ်ယူပြီး၊ oil mist sample ဟာ rotator unit မှတဆင့် measuring cell unit ကိုရောက်လာပါတယ်။ measuring cell unit နဲ့ reference cell unit တွေဟာတခုနဲ့တခု parallel တတ်ဆင်ထားတဲ့ tube တွေဖြစ်ပြီး၊ tube တခုစီရဲ့ ထိပ်တဖက်စီမှာ photo-electric cell နဲ့ အခြားထိပ်တဖက်စီမှာ lens ကိုတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ tube (၂) ခုကြားအပြင်ဖက်မှာတော့ reflector lamp မီးလုံးတလုံးကိုတတ်ဆင်ထားပြီး mirror မှန်ချပ်ကလေးတွေမှတဆင့် lens တွေပေါါ အလင်းရောင်ပေးပါတယ်။ lens ပေါါကျရောက်လာတဲ့ အလင်းရောင်ဟာ tube တဖက်ထိပ်မှာရှိတဲ့ photo-cells တွေပေါါကျရောက်နေပြီး၊ mili-amp သို့မဟုတ် mili-volt တန်ဖိုး တခုကိုထုတ်ပေးနေပါတယ်။ crank case အတွင်းမှတဆင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့ oil mist ဟာ measuring tube အတွင်း ဖြတ်သန်းသွားမှာ ဖြစ်ပြီး၊ reference tube အတွင်းမှာတော့ပြင်ပလေ out side air ဖြတ်သန်းသွားပါတယ်။
measuring tube အတွင်းမှ oil mist ရဲ့ concentration တနည်းအားဖြင့် density မြင့်တက်လာတဲ့အခါ၊ photo cell ပေါါကျရောက်နေတဲ့ အလင်းရောင်ရဲ့ intensity ကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ measuring tube photo electric cell မှထုတ်ပေးနေတဲ့ signal output တန်ဖိုးလည်း လျှော့နည်း ကျဆင်းသွားပြီး၊ reference tube photo electric cell မှထုတ်ပေးနေတဲ့ signal output တန်ဖိုးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ electrical imbalance ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ crankcase unit တခုမှာ oil mist ရဲ့ concentration မြင့်တက်လာမှုမှ တဆင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ electrical imbalance တန်ဘိုးတခုဟာ၊ alarm ကို activated ဖြစ်စေသလို၊ rotator ဟာ (၄) စက္ကန့်ခြား တခါလည်ပတ်နေရာကနေ၊ ရပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့် unit မှာ oil mist မြင့်တက်နေတယ်ဆိုတာကို၊ ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ lens နဲ့ mirror တွေမှာ oil mist တွေ ကပ်ငြိတတ်တဲ့အတွက်၊ ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်သလို၊ rotator valve နဲ့ extractor fan အပါအဝင် sampling line တွေပိတ်ဆို့မှု မဖြစ်ပေါါစေဖို့အတွက်လည်း ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. infra red - light obstruction type oil mist detector
reflector lamp မီးလုံးကို lighting source အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ obscuration type OMD တွေအစား အနီအောက်ရောင်ခြည်ဆိုတဲ့ infra red light ကိုအသုံးပြုတဲ့ obscuration type OMD တွေကိုပြောင်းလဲ အသုံးပြုလာတာတွေ့ရပါတယ်။ reflector နဲ့ infra red - light obscuration type OMD တွေဟာ၊ တည်ဆောက်ပုံ ရိုးရှင်းပေမယ့် sampling point နဲ့ detector ကြားမှာ၊ ပိုက်လိုင်းအရှည် ဆက်သွယ်ပေးဖို့ လိုအပ်ခြင်း၊ အချိန်တခုမှာ sample point တခုကိုသာ detect လုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ monitoring unit ဟာ engine ရဲ့ crankcase သို့မဟုတ် timing gear case အနီးအနားမှာတတ် ဆင်ထားရတဲ့အတွက်၊ false alarm တွေပေါါပေါက်တတ်ခြင်း အစရှိတဲ့အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် oil mist density နဲ့ အမှန်တကယ်ဖတ်ယူရရှိတဲ့တန်ဘိုး read out တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဟာ non linear အနေနဲ့ ဆက်သွယ်နေတဲ့အတွက် alarm setting ချိန်တဲ့အခါ၊ တိတိကျကျရရှိဖို့ခက်ခဲတာကို လည်းတွေ့ရပါတယ်။ monitor အနေနဲ့ oil mist density ကို mg/ liter unit အဖြစ်ဖတ်ယူခြင်းမဟုတ်ပဲ၊ smoke particles အနေနဲ့သာ ဖတ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် obscuration type of oil mist detector ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ maker တွေနဲ့ authorized dealer တွေတော်တော်များများကို၊ မေးကြည့်တဲ့အခါ၊ 2mg/lit density မှာ activated ဖြစ်စေဖို့ alarm setting ချိန်ထားတယ်လို့သာဖြေတတ်ပါတယ်။
အပေါါပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ oil mist detector ကတော့၊ သဘေ်ာတွေမှာအတွ့များတဲ့ infra red - light obstruction type ဖြစ်ပါတယ်။ control air ကို regulator မှတဆင့် low pressure compressed air အနေနဲ့ venturi unit အတွင်းသို့ပေးသွင်းပါတယ်။ အဲဒီအခါ crankcase အတွင်းမှ oil mist sample တွေကို၊ venturi unit ကစုတ်ယူ ပါတယ်။ venturi ဆိုတာကတော့ air ejector တမျိုးဖြစ်ပြီး တချို့ venturi unit တွေမှာ fan blades တွေထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားတတ်ပါတယ်။
control valve block မှ valve တွေ ကို အလိုအလျှောက်အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးပြီး၊ crankcase တခုခြင်းစီမှ၊ oil mist sample တွေကို measuring track အတွင်းသို့ပို့ပေးပါတယ်။ oil mist sample တွေကိုစုတ်ယူတဲ့အခါ oil droplets ဆိုတဲ့ ဆီအစအနတွေလည်း ပါလာတတ်တဲ့အတွက် oil droplet separator မှာစစ်ထုတ်ပြီးမှ၊ ဝင်ရောက်စေပါတယ်။ sample air ကိုတော့ detector ကိုယ်ထည်မှာ တွဲဖက်တတ်ဆင်ထားတဲ့ scavenging air chamber အတွင်းမှရယူပါတယ်။ temperature compensation အတွက် temperature sensor ကိုတတ်ဆင်ထားသလို၊ flow monitor ကိုပါ chamber ထဲမှာတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ measuring chamber ဟာ vacuum ဖြစ်နေတဲ့အတွက် sample air ဟာ အလိုအလျှောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Sintered bronze filters
crankcase တွေအတွင်းမှ oil mist sample တွေနဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ particles တွေဟာ track အတွင်းမှ infra red light source အပါအဝင်၊ chamber တွေကိုပါ၊ ညစ်ပေစေတတ်တဲ့အတွက် 'sintered bronze filters' လို့ခေါါတဲ့ ကြေးဇကာအပြားလေးတွေကိုတတ်ဆင်ပြီး၊ စစ်ယူပါတယ်။ ကြေးဇကာပြားလေးတွေကို မကြာခဏဖြုတ်ကာ သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ measuring track အတွင်းမှာ infra red LED နဲ့ photo-diode တို့ကို တတ်ဆင်ထားပြီး၊ infra red beam ရဲ့ အလင်းရောင် intensity ကို photo-diode မှ၊ electrical signal အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ၊ evaluation unit သို့ပို့ပေးပါတယ်။ oil mist density မြင့်တက် လာတဲ့အခါ infra red beam ရဲ့ intensity ကျဆင်းသွားပြီး၊ photo-diode မှ signal out put ဟာလည်း ကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. light scatter type oil mist detector
light scatter type detector တွေကတော့ oil mist sample ကို crank case အတွင်းမှာပဲ detect လုပ်တာဖြစ်သလို read out အနေနဲ့ true zero မှစတင် ဖတ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်၊ ပိုမိုတိကျတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ fog ဆိုတဲ့ နှင်းမြူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် haze ဆိုတဲ့ မီးခိုးမြူတွေရှိနေတဲ့ ညမှောင်မှောင်မှာ လက်နှိပ်ဓါတ်မီး၊ ထိုးလိုက်တဲ့အခါ၊ အလင်းတန်း light beam ကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါတယ်။ အလားတူပဲ ရေငွေ့ water vapor တွေနဲ့ steam ရေနွေးငွေ့တွေရှိနေတဲ့ ညမှောင်မှောင်မှာလည်း၊ light beam ကိုထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြည်လင်နေတဲ့ ညအမှောင် မှာတော့ light beam ကိုမြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ light scatter type detector မှာ sensor chamber အတွင်းကို၊ မီးခိုးတွေ ဝင်လာတဲ့အခါ၊ ပြန့်ကျဲနေတဲ့၊ scattering smoke particle တွေကြောင့် light beam မှာပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါါလာရပါတယ်။ အဲဒီအခါ light beam ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ photo cell ဟာ၊ activated ဖြစ်ပြီး၊ trigger circuit ကို၊ activate လုပ်စေပါတယ်။ light scatter type detector တွေဟာ၊ scatter light မှ၊ အလွန်သေးငယ်တဲ့၊ small airborne particles တွေအပေါါ မူတည်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ light scattering ဟာ absorption, reflection, refraction, polarization နဲ့ diffraction တွေပေါါမူတည် ပြီး၊ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ electromagnetic radiation နဲ့လည်း အပြန်အလှန်၊ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
engine ရဲ့ crank throw compartment တခုစီမှာ detector တခုစီ၊ တတ်ဆင်ထာပြီး၊ signal out put ကို central processing unit သို့ တစက္ကန့်မှာ (၂) ကြိမ်နှုံးဖြင့်ပေးပို့ပါတယ်။ central processing unit ကိုတော့ engine control room မှာတတ်ဆင်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ detector ဟာ crank throw compartment မှာရှိနေတာမို့ oil particles တွေသာမက splash oil ဆီအစအနတွေ "စင်" တတ်တဲ့အတွက်၊ filter နဲ့ buffer တွေကိုပါ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ အချို့ light scatter type detector တွေမှာတော့ oil mist sample ကိုစုတ်ယူဖို့ fan အသေးလေးတွေပါ ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားတာတွေ့ဖူးပါတယ်။
တကယ်တော့ oil mist detectors တွေဟာ crankcase explosion ကို ကာကွယ်တာဆီးပေးတာမဟုတ်ပဲ၊ မဖြစ်ပေါါခင် အသိပေးတဲ့ စနစ်သာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် 'alarm & monitoring unit' တခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ အမှန်တကယ် oil mist content မြင့်တက်လာတာမဟုတ်ပဲ malfunctioning မှတဆင့် engine ကို slow down ဆွဲချတတ်ပါတယ်။ သဘေ်ာဟာ အရှိန်ပြည့် full seed away နဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ open sea မှာလွပ်လွပ်လပ်လပ်သွားနေတာမဟုတ်ပဲ၊ maneuvering ဒါမှမဟုတ် 'congested water' လို၊ ရေလမ်းကြောင်းကျပ်တဲ့ high density traffic area နေရာတွေမှာ၊ သွားလာခုတ်မောင်းနေစဉ် engine ကို slow down ဆွဲချသွားခဲ့ရင် collision ဆိုတဲ့ သဘေ်ာတိုက်တာတွေအထိ၊ ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။ oil mist detector unit တွေ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေစေဖို့ သက်ဆိုင်ရာ maker ထုတ်လုပ်သူများရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း ပုံမှန်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှု regular maintenance နဲ့ စမ်းသတ်စစ်ဆေးမှု testing တွေကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်။
Reference and Image Credit : http://engineeringworkshop.blogspot.sg/
Posted by ကိုထွန်း at 01:35